Awoodda tamarta naaftada genset ma bilaabi karto oo si otomaatig ah uma joojin karto Falanqaynta Guul-darrada 1. Mashiinka Naaftada ah ayaa la qabtaa iyada oo aan wax tallaabo ah la qaadin. Solenoid 2.diesel engine waa jabay. Cilad-bixinta 〈1〉 Ku cabiray gudbinta mashiinka Diesel oo leh mitir-mitir badan, korantada shaqada ee caadiga ah waa 25.5 V, haddii gudbinta aan lahayn acti ...
Noocyada dhaliyaha naaftada ayaa laga yaabaa inay qiiqa sii daayaan inta lagu jiro hawlgalka. Midabada kala duwan ee qiiqu waxay u taagan yihiin cilado kala duwan. Haddii qiiqa dejiyaha naaftada aan waqti lagu qaban, waxay sababi kartaa fashilaad go'an soo saaraha naaftada ama xitaa inuu ku guuldareysto inuu bilaabo. Waa kuwan qaar ka mid ah xaaladda qiiqa ...